विश्व – Page 2
बुर्का लगाएकी महिलालाई पुलिसकर्मीले अंगालो हालेको तस्बिरले मच्चायो हंगामा !
August 7, 2018 Spnews Comments Off on बुर्का लगाएकी महिलालाई पुलिसकर्मीले अंगालो हालेको तस्बिरले मच्चायो हंगामा !
एजेन्सी : युरोपका विभिन्न देशमा बुर्का लगाएर पूरा अनुहार ढाक्नेबारे बहस चलिरहेको छ । केही देशले सार्वजनिक स्थानमा बुर्का लगाउन प्रतिबन्ध गरेको छ । डेनमार्कले पनि हालै यस्तो कानून पारित गरेको थियो । अगस्ट १ […]
इन्डोनेसियामा गयो शक्तिशाली भुकम्प
August 6, 2018 Spnews Comments Off on इन्डोनेसियामा गयो शक्तिशाली भुकम्प
एजेन्सी : इन्डोनेसियाको लामबाक द्विमा शक्तिशाली भुकम्प आएको छ । भुकम्पका कारण सरकारले सुनामीको चेतावनी पनि जारी गरेको छ । अमेरिकी भुगर्भ सर्वेक्षणले भुकम्पको तिब्रता ७ रिक्टर स्कल भएको बताएको छ । भुकम्पको केन्द्र बिन्दु […]
एकैदिन इन्डोनेसिया र चीनमा भूकम्प
August 3, 2018 Spnews Comments Off on एकैदिन इन्डोनेसिया र चीनमा भूकम्प
जाकार्ता । इन्डोनेसियाको पूर्वी मालुकु प्रान्तमा शुक्रबार ६.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ । भूकम्प पछी इन्डोनेसियाको मौसम विज्ञान विभागले भूकम्पबाट सुनामी आउने खतरा नरहेको स्पष्ट गरेको छ । भूकम्पबाट कुनै पनि किसिमको जीउधनको क्षति नभएको […]
उडेको पाँच मिनेटपछि विमान दुर्घटनाः ९७ यात्रु सवार
August 1, 2018 Spnews Comments Off on उडेको पाँच मिनेटपछि विमान दुर्घटनाः ९७ यात्रु सवार
बीबीसी मेक्सिकोको दुरंगो शहरमा विमान दुर्घटना भएको छ । राज्यका गभर्नरले घटनाको पुष्टि गर्दै दुर्घटनामा कसैको पनि मृत्यु नभएको जानकारी दिएका छन् । दुरंगोका गर्भनर होसे एसइपुरोले ट्वीट गर्दै चार चालक दलसहित ९७ यात्रु सवार […]
जापानको सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिकको निधन
July 27, 2018 Spnews Comments Off on जापानको सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिकको निधन
टोकियो : जापानका सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिक चियो मियाकोको ११७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । जापानको स्वास्थ्य, श्रम र समाज कल्याण मन्त्रालयले उहाँको गत आइतबार निधन भएको बिहीबार जानकारी दिएको हो । सन् १९०१ को मे […]
July 20, 2018 Spnews Comments Off on मलेसियामा ज्याला बढ्ने, मासिक १५ सय रिंगिट प्रस्ताव
काठमाडौं। मलेसियाले निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण स्वदेशी र विदेशी कामदारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। उसले कामदारहरूको पारिश्रमिक वृद्धिसम्बन्धी ‘नीतिगत प्रस्ताव’ छिट्टै नै छलफलका लागि संसदमा लग्ने भएको छ। मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले […]
एकै झट्कामा अमिताभ, शाहरुख र सलमानका लाखौं फलोअर्स घटे !
July 15, 2018 Spnews Comments Off on एकै झट्कामा अमिताभ, शाहरुख र सलमानका लाखौं फलोअर्स घटे !
एजेन्सी । बलिउड अभिनेताको ट्वीटर फलोअर्सको संख्यामा फेरि एक पटक अचानक गिरावट आएको छ। फलोअर्सका कारण उनीहरुको स्टारडम नै कम हुने भने पक्कै पनि हैन तर यो एउटा सफाइ अभियान जस्तै बनेको छ। जानकारीका अनुसार […]
बिदा नलिएको आरोपमा स्वीडेनमा एक नेपाली देश निकाला !
July 14, 2018 Spnews Comments Off on बिदा नलिएको आरोपमा स्वीडेनमा एक नेपाली देश निकाला !
हरेक कम्पनीका मालिकहरु आफ्ना कामदार कमभन्दा कम विदा बसुन् र बढीभन्दा बढी काम गरुन् भन्ने चाहन्छन् । तर, यही गर्दा स्वीडेनमा एक नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले देश छोड्ने आदेश दिएको छ । स्वीडेनको एक रेष्टुरेन्टमा कुक […]
सधै नेपालको दुख सुखमा साथ दिने जापानमा आयो ठुलो बिप्पति, मान्छेहरुको रुवाबासी, १५६ जनाको मृत्यु
July 11, 2018 Spnews Comments Off on सधै नेपालको दुख सुखमा साथ दिने जापानमा आयो ठुलो बिप्पति, मान्छेहरुको रुवाबासी, १५६ जनाको मृत्यु
टोकियो : जापानको पश्चिमी क्षेत्रका केही इलाकामा परेको अविरल वर्षाका कारण मङ्गलबार बिहानसम्ममा १६५ जनाको मृत्यु भएको छ । सोमबार बिहानसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १०० पुगेको जापानको राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारण संस्था, एनएचकेले जनाएको थियो । […]
जापानमा वर्षाका कारण ५७ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ बेपत्ता
July 8, 2018 Spnews Comments Off on जापानमा वर्षाका कारण ५७ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ बेपत्ता
टोकियो। जापानको पश्चिमी क्षेत्रका केही इलाकामा परेको अविरल वर्षाका कारण आइतबार बिहानसम्ममा ५७ जनाको मृत्यु भएको जापानी अधिकारीले पुष्टि गरेका छन्। जापानको राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रशारण संस्था, एनएचकेले अविरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण ५७ जनाको ज्यान […]